Iyo itsva vhezheni yeSlax inochinja Slackware yeDebian | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeSlax lightweight kugovera ichangoburitswa, vhezheni inonzi Slax 9.2.1. Iyo vhezheni inobuda mushure memakore maviri ekunyarara kubva kune vanogadzira.
Slax 9.2.1 inoramba ichitarisa pasirese yezvikwata zvepasi-zviwanikwa, kuve zvakare imwe yesimba rekuparadzira mwenje pamusika, asi zvakare inounza nhau, nhau dzakakosha dzinozoita kuti tirege kugovera kana kwete.
Iyo nyowani vhezheni yeSlax haizoshandisa Slackware sekuparadzira base asi ichave Debian. Maneja weprojekiti anosimbisa kuti shanduko iyi inokonzereswa nekuti iyo Debian inokodzera kugovera kwehupenyu hwake hwezuva nezuva uye anofungidzira kuti iriwo kune vamwe vashandisi.
Unleashing zvakare zvakare kukakavara pamusoro pekugovera kupi kuri nyore kumushandisi / musimudziri. Chero zvazvingaitika, Debian 9 ichave hwaro hweshanduro iyi nyowani, chigadziko chemwenje semufananidzo wekumisikidza unongotora 200 Mb.
Slax 9.2.1 haina desktop asi inoshandisa Thunar, Fluxbox semaneja wewindows uye xLunch sepurogiramu yepaneru. Iyi software ichave ichiperekedzwa neChromium, Leafpad seyemavara edhita uye yekupedzisira emulator. Zvinoda kuziva kuti Tomas Matejicek afunga kuita skimp pamabasa mazhinji ekugovera asi haana kuzviita newebhusaiti.
Pamwe nekuti basa rako rezuva nezuva, sebasa revamwe vazhinji vashandisi, rakavakirwa paWWW uye kwete pamashandisirwo emuno. Iyo kernel yekugovera iyi ndeyakareba rutsigiro kernel, kunyanya Kernel 4.9, iyo imwechete kernel iyo parizvino ine kugoverwa kweDebian. Slax inozivikanwa zvikuru isingaremi kugovera, iyo yekumisa mufananidzo inogona kuwanikwa kubva iyo yepamutemo webhusaiti yepurojekiti.
Ini pachezvangu ndakayedza ichi chisina kurema kugovera uye ndizvo kumwe kwekugovera kwakanakisa kuripo kwezvikwata zvine zviwanikwa zvishoma, asi ichokwadi kuti kukwikwidza kwaive muSlackware base yayo, chimwe chinhu icho chakarasika parizvino uye vashandisi vayo vanogona, kana pamwe kwete Unofungei? Iwe unofunga Slax icharega kuve inonakidza nekuda kweshanduko iyi? Wakamboedza Slax here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo itsva vhezheni yeSlax inochinja Slackware yeDebian
Mutungamiri weprojekti haana simba. Icho bhokisi rinotonhora rekuchinjira kune debian. SLAX sos kubva kuB.
ndiani zita rayo izvozvi, nekuti Slax akatofa, debianX? Uye kana, sekutaura kwaRodrigo, maneja weprojekiti haagone kumira mamvemve!
Ini handina kutanga kana makumi matanhatu neshanu kana makumi matatu nematatu pamashini akasiyana
Zvakanaka shanduko, Slax yaive nekusingaperi software kugadzirisa matambudziko uye kutsamira
Nguva yekupedzisira pandakaiyedza, yaive neshanduro dzemoto firefox makore matatu asiri echinyakare, ine dhibian repository izvi zvichagadziriswa.
Ini ndinoshanda pamwe nekuparadzira dhibi, asi ini ndoda kukwanisa kuisa iyo slackware package mune debian, kuti ndikwanise kushanda pamwe nemaviri akaparadzirwa, debian & slax
Pindura kuna xavisan
Ndakafadzwa apo kushambadzira kweslackware kwakapinda munzira, asi pandakaona kuti kugovera kuri ubuntuu mufananidzo wakauya kwandiri nekukurumidza zvikuru mupfungwa dzangu
ubuntu = maburi uye zviputi mumapoka
Hazvina kufanana zvakare; musimboti weiyi distro yaifanira kuve inotakurika Slackware. Kukanganisa kukuru kwekusiya Slackware sisitimu huru. Panyaya ye "kugadzikana" Debian uye Slackware vane marongero akafanana: vanosarudza kumhanyisa vhezheni yesoftware kubva makore matatu apfuura asi kuti sisitimu yacho yakasimba chose. Slackware inopawo rutsigiro, haina kufa distro kure nayo. Ini handinzwisise chikonzero chekuchinja uye, ini pachangu, ndinosiya Slax (ndanga ndichiishandisa kwemakore akati wandei) ndoenda kuPorteus. Yakanyadziswa zvachose ne switch kuna Debian.
David G. akadaro
Ndanga ndichitsvaga Debian based distro iyo isina huremu, iyo slax nyowani inoita kunge ndiyo imwe nzira. Ini pachangu ndinogutsikana nedhidhi package, pane imwe nguva ndakaedza light distro yakavakirwa pane slackware, pakutanga ini ndakaedza kuisa chirongwa chakajairika chekushandisa zuva nezuva kwandiri, kubva kune chinongedzo nemaneja wepakeji (yaive munzvimbo dzekuchengetera) . Izvo hazvina kushanda, kukanganisa kwekutsamira; Izvo hazvisi izvo kuti hazviitike mune madhiri kana mamwe ma distros, asi izvo zvinoodza moyo uye zvinokuita kuti udzokere kune izvo zvaunoziva. Pasina kutaura kuti mazhinji mapurogiramu asiri emahara software, senge skype, timu yekutarisa, vane yavo madhi uye rpm vhezheni, izvo zvinowanzo sanganisira reposvo raimboiswa. Ini handidi chaizvo kureruka kureruka, nekuti danho reDebian neXFCE haripfuuri izvo zvinodiwa nelaptop yangu (iyo RAM yekushandisa nedesktop pazororo i12%) asi kana laptop ine mwero ichindida kuti ndiise chimwe chinhu chakareruka, icho inogona kutora slax kufunga. Kunyangwe hongu, zvinosuwisa kuti iyo slackware base yakarasika, kune avo vanoisarudza. Zvichida mugadziri anogona kupa script inoisa iyo windows maneja uye zvimwe zvinhu, kuiisa pamusoro peimwe slackware-based distro. Kana ingo tsvaga imwe yakafanana slackware-based distro.
Pindura kuna David G